Trump oo cambaarayn caalami ah kala kulmay ka bixidda heshiiska cimilada - BBC News Somali
Trump oo cambaarayn caalami ah kala kulmay ka bixidda heshiiska cimilada
2 Juunyo 2017
Adduunka ayaa si wayn u cambaareeyay ku dhawaaqitaanka madaxweyne Trump ee ku aadan in Maraykanku uu ka baxayo heshiiskii la dagaalanka isbedelka cimilada adduunka ee Paris lagu gaaray 2015kii.
Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa go'aankaas ku tilmaamay "mid niyad jab wayn la imanaya" halka Midawga Yurubna uu ku tilmaamay "maalin murugo oo adduunka soo foodsaartay".
Si kastaba ha ahaatee saraakiil sare oo xisbiga Dimuqraaddiga ka tirsan iyo warshadaha dhuxusha ayaa soo dhaweeyay go'aankan.
Madaxweyne Trump ayaa caddeeyey in Maraykanku ka baxayo heshiiskii Paris ee la dagaalanka isbedelka cimilada aduunka.
Isagoo taagan kaabadda Aqalka Cad ayaa Trump, oo la hadlayey warbaahintu, wuxuu sheegay in heshiiskani uu ciqaab ku yahay Maraykanku uuna dalka ka sii qaado malaayiin shaqo ah.
Wuxuu sheegay inuu yahay tusaalihii u dambeeyey ee muujinaya in Washington gasho heshiisyo dalalka kale faa'iido u leh laakiin uu diyaar u yahay heshiis kale oo xeerarkiisu u cadaalad falayaan Maraykanka.
Haweenay magac ku leh xisbiga Jamhuuriga Maraykanka oo ka "baqaysa" siyaasadda Trump
Magaalooyin waa weyn oo mamnuucaya gawaarida ku shaqeysa naaftada
UK oo Tanzania ka caawinaysa diyaarado aan duuliye la socon oo dawooyinka qaada
Madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, oo heshiiskan wada xaajood ka galay markii dambena saxiixay ayaa sheegay in waxa maamulka Trump diidanyahay uu yahay mustaqbal fiican.
Obama waxaa kale oo uu sheegay in uu ku kalsoonyahay in gobollada, magaalooyinka iyo shirkadaha Maraykanku ay dadaalkooda dardar gelin doonaan oo ay hogaan u noqon doonaan qorshaha la doonayo in lagu badbaadiyo dunida.
Image caption Qiiqa warshadaha ayaa loo aaneeyaa cimilada sii kululaanaysa
Maqal Wareysi: arrimaha isbeddelka cimilada adduunka- Dr Cabdullaahi Cilmi Maxamed (Asad)
21 Abriil 2017
50 ku dhimatay daadad ku dhuftay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo
29 Disembar 2016
24 Maajo 2017